U-Anatoly Papanov ungumuntu onetalente emangalisayo. Iminyaka yakhe yokuphila yiminyaka yezindima eziningi ezinhle emidlalo yaseshashalazini kanye ne-cinema. I-Biography yePapanov yindaba yomuntu ohlakaniphile nonamandla. U-Anatoly Papanov, i-biography neminyaka yokuphila yalowo muntu uyohlala ethanda abalandeli bakhe abangasoze balikhohlwa lo mdlali omuhle.
Kungani uqala indaba ngo-Anatoly Papanov, biography neminyaka yokuphila? U-Anatoly wazalwa ngomhlaka 31 Okthoba 1922. UPapanov wabonakala edolobheni laseVyazma. I-biography yabazali bayo ayiyona into ephawulekayo. Impilo yabo iyimpilo yabasebenzi abajwayelekile. Umlingisi wasebenzisa ubuntwana bakhe eVyazma. Futhi ngo-1930, u-Anatoly nabazali bakhe bathuthela eMoscow. Kuyadingeka ukuthi ekuqaleni iPapanov yawela ngaphansi kwethonya elibi lezinkampani zasemgwaqweni. Kodwa empilweni yakhe yonke into yashintsha lapho umfana engena embuthanweni omkhulu. Iminyaka esencane eyayihlala lapho, yafaka uthando lomlingani wezobuciko futhi yanciphisa noma yisiphi isifiso sokubandakanya iziphukuphuku. Yiqiniso, i-biography yomfana ovela emndenini olula osebenzayo kwakungeyona elula futhi ekhanyayo. Akazange abe ngumdlali. Kodwa uPapanov wayefuna ukwenza iphupho lakhe ligcwaliseke, futhi waya ngokuzimisela kuye. Ngakho-ke, ngemva kokuphothula iziqu, lo mfana waya efektri njenge-caster. Ngesikhathi esifanayo, wakwazi ukuya enkundleni yezemidlalo "irayibha". Futhi akusikho konke. Umlingisi wekusasa uphinde wabamba iqhaza ekwengeziwe kwi "Mosfilm". Ufuna ngempela umqondisi odumile ukuba ambone futhi ameme okungenani i-episodic role role.
Kodwa ngalezo zinsuku usizi olubi kakhulu lwenzeka - iMpi Yezwe Yesibili yaqala. UPapanov, njengabo bonke abafana beminyaka yobudala bakhe, waya phambili. Ngokushesha wafika emgqeni wangaphambili, okwakungapheli kahle. Walimala emilenzeni yakhe futhi wabuyela eMoscow izinyanga eziyisithupha ngemuva kokuthunyelwa phambili. Futhi nakuba ukulimala kwakungathí sina, ngakolunye uhlangothi, akekho owaziyo ukuthi uzobe uphele uma ehlala phambili. Ngakho-ke, ngemva kokubuyela ekhaya, uPapanov wayesenquma futhi wangena ku-State Institute of Theatrical Art. Ngemva kokudlula zonke izivivinyo ngokugcwele, u-Anatoly wabhalisa e-Orlovs 'workshop. Laba badlali basebenza eMoscow Art Theatre kusukela ezinsukwini zabafundi, iPapanov yathandana kakhulu nale ndawo yaseshashalazini. Yonke iminyaka yokuqeqeshwa i-Anatoly yayisezinhle kakhulu. Ukusebenza kwakhe kokugcina kwakunengqondo futhi uPapanov wamenywa ukuba adlale eMoscow Art Theatre naseshashalazini encane. Vumelana, hhayi wonke umuntu, ngisho nomdlali omncane onethalente, ngokushesha nje ngenhlanhla empilweni. Kodwa-ke, uPapanov kwakudingeka akhiphe ithuba elinjalo lokwenza umsebenzi omkhulu enhlokodolobha. Iqiniso liwukuthi ngenkathi umlingisi efunda, wakwazi ukuthandana futhi ashada nomuntu ofunda naye esikoleni uNadezhda Kartayeva. Le ntombazane yathunyelwa emidlalo yaseshashalazini yaseRussia yaseKlaipeda ngemuva kokuqeda iziqu. UPapanov akakwazanga ukushiya umkakhe othandekayo futhi waya naye eMelika yaseBaltic.
Kwadlula isikhathi, uNadia wenza isikhathi esingeke senzeke ebhayisikobho yaseBaltic futhi babuyela eMoscow. Ngaleso sikhathi, u-Anatoly wamenzela umqondisi wakhe weSateratre u-Andrei Goncharov. Kodwa-ke, yize wonke umuntu ebona ithalenta likaPapanov, akazange anikezwe izindima ezihola isikhathi eside. Konke kwashintsha ngemuva kokuba u-Anatolia adlale kulo mdlalo "Kiss The Fairy's". Umlingisi wayejabule kakhulu ngabagxeka abaningi. Wabe esedlala eminye imikhiqizo eminingi, ekugcineni eqinisekisa ukuthi uPapanov unet talente enkulu nesibindi. Ngokuphathelene naye waqala ukukhuluma emibuthanweni yeshashalazi futhi izilaleli zaqala ukuqaphela uPapanov. Ngokushesha u-Anatoly waba omunye wabadlali abakhulu bezemidlalo. Wasebenza lapho kuze kube sekupheleni, kuze kube sekufeni kwakhe, cishe eminyakeni engamashumi amahlanu. Konke kuphawulwe ukuthi usebenza ngokumangalisayo ngezindandatho zamahlaya nezokuhlukumezeka. UPapanov wakwazi ukubonisa hhayi nje uhlamvu lwabaculi bezinhlamvu, kodwa futhi nezinhlekelele zabo zokuphila, okuhlangenwe nakho, imicabango nemizwa.
Yingakho ithalenta lakhe lingenakuhluleka ukubheka abaqondisi ababesebenzela i-cinematography. Nakuba ngaphambi kweminyaka engamashumi ayisithupha abazange bamnake, ngemuva kwe-movie ethi "Alive and the Dead" konke kwashintsha. Ngemuva kwalesi sithombe, abaqondisi abaningi babefuna ukudubula iPapanova. Baqaphela ngokushesha ukuthi umlingisi uyakwazi ukudlala izindima ezihlukahlukene. Kungadutshulwa ngokuphelele kuzo zonke izinhlobo zezinhlobo, zihlale zihlala ziphilayo futhi zendalo. Akekho wabalingiswa bakhe ongase abizwe ngokuthi uphethwe noma uphethwe. Nomaphi lapho uPapanov engabonakali khona, amaqhawe akhe ayekholelwa njalo konke. Ingabonakala kumafilimu angokwengqondo, nakuma-comedy nama-satires. Umlingisi wakwazi ukuhlanganisa ukulinganisa kanye nenhlekelele, ngenkathi enikeza abalingiswa bakhe ububanzi obunemizwa nemizwelo lapho iqhawe lakhe ngalinye liwela empilweni yababukeli.
Futhi emva kwefilimu "Qaphela imoto" ePapanov, sabona umculi omuhle kakhulu. Ngemuva kwefilimu, wadlala ku-comedies ehlukahlukene, esazi sonke futhi siyayithanda. Yilo kuphela uPapanov owayengajabuli kakhulu ngokuthandwa kwakhe kulo mfanekiso. Wazi kahle ukuthi angadlala amadrama, ngakho wazama njalo ukufakazela lokhu kubenzi befilimu nombukeli. Yiqiniso, uPapanov wakwenza. Isiqinisekiso esihle kakhulu ifilimu "iSiteshi Sokuthutha SaseBelorussky". Kodwa, okwamanje, umlingisi uhlale ecatshangwa ukuthi izethameli ziyakuthanda amahlaya akhe, ngakho wabuyela emisebenzini yama-comedic. Wayengakaze aziqhenye ngokuziwayo kwakhe futhi wazama njalo ukubheka ukungaboni kahle ukuze akwazi ukuphumula e-cottage futhi agibele ibhayisikili.
Siyazi u-Anatoly Papanov hhayi kuphela kumafilimu. Izwi lakhe lithi othandekayo kuyo yonke i-Wolf kusukela "Hlala, linda! ". Leli zwi ngeke lidideke yinoma yimuphi umntanakho futhi akekho omdala owakhulela kule cartoon. Futhi sonke sakhula kuso.
UPapanov wayengumuntu omuhle, onomusa, othembekile futhi omsulwa. Naphezu kokuthi ngaleso sikhathi ukholo lwashushiswa, waya ethempelini futhi wathandaza kuNkulunkulu. Konke ukuphila kwakhe uPapanov kwakuhlala nomfazi. Ngeshwa, ukuhlaselwa kwenhliziyo kwamphulukisa kakhulu empilweni, kungenjalo wayengakwazi ukudlala okuningi. Kodwa, ngemva kweminyaka eminingi kangaka, akekho okhohliwe ngoPapanov. Sibheka amafilimu naye, siyabonga, sihleka, ngaleyo ndlela sihlonipha lo muntu omuhle nomlingisi.
Umculi othandekayo uRuslana Lyzhichko
USerega ushiya isiteji
Larisa Guzeeva - amaqiniso athakazelisayo okuvela ekuphileni
I-Horoscope ye-Scorpio-Abesifazane ngoNovemba 2016
Yakha ngokwakho u-spring mood
"Flower" igqoke: umkhuba spring - 2016
Izindawo ezingavamile kakhulu zobulili
Virgo: i-horoscope yokuwa 2013
Ukuphumula komzimba ngesikhathi sokubeletha
Isaladi kusuka emanzini asolwandle
Iresiphi ye "ama-muffin amnandi"
I-Casserole ene-double ushizi neqanda
Yini ongayinika uMama, udade noma intombi ngoKhisimusi?
Ubisi lwekakhukhunathi nama-shavings
Ukulahlekelwa izinwele ngenxa yezinguquko ze-hormone